पिक-अप-ट्रक पल्टिँदा १३ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । थाइल्याण्डमा एउटा ‘पिक–अप ट्रक’ ले लेन एक्सचेन्ज गर्ने क्रममा उक्त ट्रकमा यात्रा गरिरहेका अधिकांश विद्यार्थीसहित कम्तीमा १३ जनाको राजधानी बैंककमा मृत्यु भएको छ । सीसीटीभीमा रेकर्ड भएको दृष्...
एजेन्सी । तपाइको प्रेमीको अनुहार तपाइँसँग मिल्दछ ? या कपालको रङ, छालाको रङ वा दाजुबहिनी/दिदीभाई जस्तो देखिनुहुन्छ ? सायद यस्तो हुने गरेको हुँदो हो । लाखौँ अमेरिकीहरु आफूमा यस्तो हुने गरेको बताउँदै आइ...
गगन थापा भन्छन्, ‘सरकार फासिष्ट हुन थाल्यो’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले शनिबार ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि चितवनमा भएको आक्रमणलाई सरकार फासिस्ट हुन थालेको संकेत देखिएको बताएका छन् । विजया दशमीको अवसरमा आइतबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र क...
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले दशैंमा गाउँ जाँदा पार्टीका एजेण्डाहरुलाई प्रत्येक सर्वसाधारणसम्म पु¥याउन पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएका छन । पार्टीको भातृ...